Food on Wheels ayaa mutadawiciin ah oo ku jira wararka - Cunnada on Wheels
Food on Wheels mutadawiciin news
Waxaan baranay intii uu socday cudurka faafa in mutadawiciinta Cunnada ee Wheels ay sii wadi doonaan bixinta inkasta oo caqabadaha dunidu ay ku tuurto iyaga. Waxaan ku faraxsannahay inaan aragno warbaahinta oo tixgelinaysa dadaalkooda usbuucan marka loo eego qiimaha gaaska ee kor u kacay.
KSTP waxaa joojiyey Adeegyada Gurmadka Degdegga ah ee Bulshada oo la sheekaystay mutadawac Paul Bondhus. Waxa uu lahaa sidan soo socota si uu u sheego macnaha isaga inuu si joogto ah u keeno cuntooyin nafaqo leh deriskiisa wakhtigan:
“Waa mudnaan aadna way u mahadsan yihiin. Qaarkood waxaad tahay qofka kaliya ee ay arkaan, gaar ahaan inta lagu jiro COVID. Waa dhibaato adduunka koowaad, aniga ahaan ugu yaraan. Waa qiimo yar oo lagu bixiyo wax kasta oo aan samayno, hadday tahay dimoqraadiyadda Ukraine, hadday tahay dimoqraadiyadda guriga. Waa allabarigii ugu yaraa ee aan qiyaasi karo."
Warbaahinta CCX ee xaafadaha waqooyi-galbeed ayaa lagu hubiyay CROSS Cunnooyin Taag leh sidoo kale. Volunteer Joanne Reinhart ayaa wadaagtay sababta ay uga go'an tahay inay caawiso deriskeeda:
"Waxaan ka fariistay xirfadeyda kalkaalinta caafimaadka oo aan ku jiray 45 sano, bishii Luulyo ee sannadkii hore. Oo waxaan ogaa inaan doonayo inaan sameeyo wax aan dib u soo celiyo, wax caawinaya, sababtoo ah taasi waa waxa aan sameeyay kalkaaliye ahaan, iyo noocaan oo kale ayaa taas fulisa. "
Koofiyadaha iskaa wax u qabso ku ah Cunnooyinka Wheels kuwaas oo wax ka keena dhammaan noocyada caqabadaha. Haddii aad jeceshahay inaad noqoto tabaruce, wax badan ka baro halkan. Sidoo kale waad awoodaa tabaruc samayso iyadoo lagu sharfay shaqadooda.
Maarso 11, 2022